ကလေး အဖျားမတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဆရာရှင် ကျွန်မ ကလေးက အဖျားရင် အဖျားအလွန်တက်ပါတယ် .. တစ်ခါကဆို အဖျားကြီးပြီး တက်သွားလို့ ဆေးရုံ အထိ ရောက်ပါတယ် …
ကလေး အဖျားမတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိလိုပါတယ်ရှင်
ကလေး အဖျားကြီး ရင် တက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဖျားအပူချိန် ၁၀၀•ဖာရင်ဟိုက်လောက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ပါရာစီတမောစတင်တိုက်ကျွေးခြင်း၊ ရေပတ်တိုက်ပေးခြင်း၊ ရေချိုးပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ပေးရပါမယ်။ နို့စို့အရွယ်အတွက်ဆိုရင် မိခင်နို့၊ရေကျက်အေးတို့ကို ပုံမှတ်ထက်ပိုမိုတိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်ပူခြင်းနဲ့တွဲပြီး ၁. ဇက်တောင့်ခြင်း၊ ခိုင်ခြင်း ၂. သတိမေ့ခြင်း၊ အလွန်အမင်းမှိန်းခြင်း ၃. ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်း၎.ဝမ်းအလွန်လျှောခြင်းတို့ရှိရင်တော့ ဆေးရုံကိုအမြန်ဆုံး ခေါ်သွားသင့်ပါတယ်။